5 Zvinhu Zvinonakidza Zvekuita MuWiricheya
Kungoti iwe wakasungwa kune a wiricheya hazvireve kuti haugone kunakidzwa. Pachine zvakawanda zvekunakidzwa zviitiko zvaunobuda uye zvaunoita uye uchiri nenguva yakanaka uye tichaenda kunonyora mashanu akasiyana aunogona kutanga kuita nhasi.
Unogona kuenda mumhanzi mhenyu muresitorendi kana kungogara konzati. Iyo inzira yakanaka yekusimudza manzwiro emumwe munhu uye kuvhenekera zuva rako. Nzvimbo dzakawanda dzemimhanzi dzine mawiricheya "perks" zvinoreva kuti unogona kuona bhendi kana muimbi ari padyo uye pamwe kusangana nevatambi kumashure. Kubvumidzwa kunowanzo kuve kwemahara kana kuti imari shoma.
Paunoenda kuimba yemitambo ne wiricheya hazvina basa nekuti iwe uchanakidzwa nemuvhi zvakangofanana nemunhu asina. Uyezve ndiani asingazonakidzwa ne3D movie kuratidza? Yese yemitambo ine zvigaro zvakakosha zvevashandisi ve mavhiripu saka iva nechokwadi.
3. Kushanyira Winery
Kana iwe uchida kunwa waini saka iyi ndeyako. Kushanya kwewaini kunotyisa nekuti iwe unogona kutenderera uchiedza waini dzakasiyana. Zvakare, vazhinji vanokutora iwe kuburikidza nemunda wemizambiringa uye izvo chete zvinonzwika zvakakodzera rwendo. Iri zvakare zano rakanaka rezuva kana iwe ukambozviwana iwe uchida mazano kana iwe uri wiricheya mushandisi.
Kubuda kwekasino kunogona kuve husiku hunonakidza kana iwe uchibheja pano nepapo. Iwe unozofambidzana zvakawanda pano nevatengesi nevanhu vanoenda husiku ihwohwo zvakare. Iwe unogona kurova michina yekutsikisa kana kungo rova ​​matafura ndiyo sarudzo yako. Pakazara chiitiko chikuru chekunzwa saka nakidzwa nazvo.
Inenge yese nhandare ye bowling iri wiricheya inoshamwaridzika asi kuve parutivi rwakachengeteka iwe ungangoda kufona pamberi penguva kuti uve nechokwadi. Wese munhu anovimbiswa kuva nenguva yakanaka pane imwe bowling alley. Mushure mezvose, iwe unongoshandisa muviri wako wepamusoro kwete rako repasi muviri. Kubhadhara kunoenderana ne bowling kunogona kuenda kunotamba mini-gorofu nekuti nzvimbo zhinji dzakakura zvakakwana kutsigira mavhiripu.
Rova-uye-mhanya wakapona newiricheya
Ramangwana ndiro newiricheya